China Umgangatho wevenkile yeCrane yoMvelisi kunye noMthengisi | Daxin
I-crane yomgangatho wevenkile ilungele ukuphatha indawo yokugcina izinto kunye neevenkile ezahlukeneyo zokulungisa iimoto. Umzekelo, ungayisebenzisa ukuphakamisa injini. Iikhrani zethu zilula kwaye kulula ukuzisebenzisa, kwaye zinokuhamba ngokukhululekileyo kwiindawo ezixineneyo zokusebenza. Ibhetri eyomeleleyo inokuxhasa umsebenzi wosuku.
Max Ukuphakamisa Ubude: 2220mm * 3350mm
Uluhlu lwamandla: 650-1000kg
UMax Crane Wandisa uLuhlu: Ubukhulu: 813mm-1200mm
Ukuhanjiswa simahla kolwandle kweLCL kuyafumaneka kumazibuko athile
Iimpawu kunye nokuKhusela
Umgangatho weeNdawo zokuThwala iiNdwendwe zinokusetyenziswa kumashishini amaninzi. I-crane yoomatshini inomthwalo omkhulu wokuthwala umthwalo kwaye kulula ngakumbi ukuba usebenze. IMini Crane inokuphakamisa izinto ezinzima ngokulula kwaye ikhulule izandla zomqhubi. Iselfowuni iBhetri Crane ifakwe ibhetri enamandla, kwaye ungayithatha isebenze kwiindawo ezahlukeneyo. Xa kuthelekiswa nesibane sombane, i-crane ibhetyebhetye ngakumbi xa usebenza ngaphakathi. Ukongeza kule mveliso, sinezinto ezininzi iimveliso isetyenziswe kwimveliso kunye nobomi, obunokwenza umsebenzi wethu ube lula kwaye usebenze ngakumbi. Ukuba ufuna le mveliso igqwesileyo, nceda usithumelele umbuzo ngeenkcukacha ezithile, kwaye silindele wena.
Q: Nguwuphi owona mthamo mkhulu wokuthwala lo Mgangatho weevenkile zeVenkile?
A: Xa i-crane isebenza nge-boom enye kuphela, i-hydraulic crane inokuthwala ubunzima beetoni enye. Ukuba uneemfuno ezizodwa, ungaqhagamshelana nathi ukuba wenze yona.
Q: Ngaba i-boom ephambili inomsebenzi wokujikeleza?
A: Ewe, ukujikeleza okuphambili kunokujikeleziswa ukuze uphucule ukusebenza kakuhle komsebenzi.
Q: Loluphi ulwazi endinokukuxelela lona xa ndifuna ukufumana ixabiso?
A: Ukuze ndikubonelele ngeenkonzo ezingcono nezichanekileyo, kuya kufuneka ukuba undinike ukuphakama okuphezulu, amandla, kunye noluhlu oluphambili lokujikeleza kwengalo olifunayo.
Q: Isebenza njani i-crane yomgangatho wevenkile?
I-A: Ngaphantsi kweemeko zokusebenza eziqhelekileyo, i-crane ehambayo inokusebenza usuku lonke okanye nangaphezulu.
Omnye wabathengi bethu ovela kwivenkile yokulungisa iimoto yaseMelika uthenge i-Floor Shop Crane yethu ukuba athwale iinxalenye zeemoto ezinzima kumasifundisane.
Kwincoko noJerry, usixelele ukuba kulungile ukusebenzisa. Akasebenzisi zandla ukuphatha izinto ezinzima konke konke, ukugcina iinzame ezininzi, kwaye ngenxa yokuba umgangatho wethu ulungile kakhulu, uthathe isigqibo sokuqhubeka nokuthenga omnye wethu uMgangatho wePlate 2 iPost Car Lift isetyenziselwa ukulungisa ngcono ezantsi imoto. Ndicinga ukuba uJerry uzakuqhubeka nokusebenzisana nathi, kwaye angade abe ngabahlobo abalungileyo kuthi.
Omnye wabathengi bethu base-Australia wathenga i-crane yevenkile yasemhlabeni yokuphatha izinto kumzi-mveliso. Ngenxa yokuba iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo, ziye zamkelwa nguTom kunye nabasebenzi bakhe. Emva kweencoko ezininzi, bagqibe kwelokuba bathenge iikhreyithi ezininzi kwaye bafake izicelo zezatifikethi zemfundo ukuze babe ngabathengisi bethu e-Australia. Enkosi kakhulu uTom ngokuthembela kwakhe kwiimveliso zethu. Ngokuqinisekileyo siya kubonelela ngenkonzo engcono kunye nenkxaso yokuthengisa.
Max Ukuphakamisa Ubude
Irhoxisiwe / yandiswa
Ubukhulu Ubude I-crane yandisiwe
Imilenze yobude obukhulu yandiswa
Egqithileyo Isisisi esiShukumayo sokuPhakamisa imoto
Okulandelayo: Umshini Glass ophakamisa
Iifreyim zevenkile ezi-1 ezinamandla onke (amandla ombane kunye namandla ngaphakathi / ukuphuma) ukuphuma kwemithwalo ngokukhawuleza, ngokulula nangokukhuselekileyo.
I-2.24V DC ukuqhuba kunye nokuphakamisa iimoto ukuphatha imisebenzi enzima.
Isiphatho se-Ergonomic sisebenza ngokulula ukusebenza kunye nohlengahlengiso olungenasiphelo lokuhamba phambili nokubuyela umva isantya, ukuphakamisa / ulawulo olusezantsi, ukhuseleko olusebenzayo lokukhulisa umsebenzi ongxamisekileyo wokubuyela umva, kunye nophondo.
3.Ibandakanya i-disc ye-electromagnetic disc brake ene-othomathikhi yomntu ofileyo osebenzayo xa umsebenzisi ekhupha isiphatho.
I-crane yevenkile enikwe amandla ine-12V, 80 - 95 / Ah ekhokelela kwiibhetri ezinzulu zeasidi, itshaja yebhetri ehambelana nayo, kunye nenqanaba lebhetri.
5.I-Poly-on-steel steer kunye nevili zokulayisha.
Ukusebenza kweeyure ezingama-6.3-4 ngentlawulo epheleleyo- iiyure ezi-8 xa zisetyenziswa ngamatyeli. Kuquka ikhonkco eliqinileyo kunye ne-latch yokhuseleko
1. Ukuqhuma kwe-valves-proof valves: khusela umbhobho we-hydraulic, anti-hydraulic pipe break.
2. I-valve ye-Spillover: Inokuthintela uxinzelelo oluphezulu xa umatshini esenyuka. Lungisa uxinzelelo.
3. Ivaluva yokwehla okungxamisekileyo: inokuhla xa udibana nongxamiseko okanye ucime umbane.
Xabiso Floor Crane
Ixabiso le-Crane Shop yoxabiso
Ixabiso legaraji Crane
Ixabiso elincinci le-Crane